पूर्वकै शैक्षिक हव बन्दै इटहरी : कस्ता छन् कलेजहरु ? | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » सम्वृद्धि यात्रा » पूर्वकै शैक्षिक हव बन्दै इटहरी : कस्ता छन् कलेजहरु ?
Posted by Itahari Fm | error | १०६८३ पटक
कुनै समय इटहरी बस तथा ट्रकहरु रोकेर चिया खाने ठाउँ थियो, त्यो बेला इटहरीको शैक्षिक अवस्था ज्यादै कमजोर थियो । इटहरीमा उच्च शिक्षा हाँसिल गर्ने कुनै शिक्षण संस्था थिएन । इटहरीका मानिसहरु पढ्नका लागि कि त धरान जानु पर्दथ्यो कि त विराटनगर । दुई ठुला शहरहरुमा आफ्नो शैक्षिक भविष्य खोज्न जानुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ । अहिले ति ठुला शहरहरुलाई मात खुवाउँदै इटहरी समग्र पूर्व क्षेत्रकै शैक्षिक हवको रुपमा विकास भएको छ ।
जसरी इटहरी भौगोलिक पूर्वाधार, व्यापारीक कारोबारको केन्द्रको रुपमा विकास भयो, त्योसँगै शैक्षिक क्षेत्रको हवको रुपमा आफुलाई विकास गरेको छ ।
अर्को रोचक पक्ष के पनि छ भने इटहरीबाट उच्च शिक्षा लिन धरान, विराटनगर गएर शिक्षा लिएका इटहरीका सन्तानले नै अहिले तिनै शिक्षण संस्थाहरुलाई मात खुवाउने, आरीस लाग्दो शैलीको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भव्य शिक्षण संस्था स्थापना गरेका छन् ।
यसको भित्री र गुदी कुरा के हो भने विगत लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा अनुभवले खारिएका व्यक्तिहरुको लगानीमा शिक्षण संस्था खोलीनु पनि हो । प्रेम प्रसाद न्यौपाने, लेखनाथ घिमिरे, बोधराज नेपाल ,मनुमञ्जिल जस्ता व्यक्तिहरुको प्रतक्ष्य उपस्थिती रहनु अनि दोस्रो पुस्ताका गणेश दुलाल, पोषराज नेपाल, कमलेस पौडेल जस्ता दक्ष व्यक्तिहरुले व्यवस्थापन सम्हालेका कारण पनि इटहरीका शिक्षण संस्थाहरु अब्बल बन्न सफल भएका हुन भन्दा खासै अति उक्ति नहोला ।
एक से एक कलेजहरु इटहरीमा खुलेका छन् । विद्यार्थीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा लिनका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ भने अन्यत्रका विद्यार्थीहरु इटहरी आउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा इटहरीमा कलेजको छनौट कसरी गर्ने विद्यार्थीलाई समस्या पर्न सक्छ । यसमा विद्यार्थीहरुले आफुलाई पढ्ने इच्छा भएको र आफ्ना लागि अनुकुल कलेज छनौट गर्न यी कलेज सम्म त पुग्नै पर्छ ।
इटहरीका उत्कृष्ठ कलेजहरु मध्येको एक हो विश्व आर्दश कलेज । गुणस्तरीय र राम्रो नतिजाको कारण विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाईमा पर्ने गरेको छ । अनुभवी र दक्ष शिक्षक, उपयुक्त शैक्षिक वातावरणले गर्दा पनि यो कलेज प्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।कलेजले स्थापनाकालबाट नै प्लस टुमा विज्ञान, व्यवस्थापन विषयमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । विज्ञान विषय पढ्न धेरै विद्यार्थीहरुको चाप हुने गरेको कलेजले जनकारी दिएको छ । विद्यार्थीको सुविधाको लागि विहानी र दिवा सत्र गरि दुई सिफ्टमा अध्यापन गराउँदै आएको कलेजका प्राचार्य लेखनाथ घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उत्कृष्ठ पटन पाठन, उत्कृष्ठ नतिजा, विश्व आर्दश कलेजको मौलिक विशेषता भन्ने नारा नै लिएर उत्कृष्ठ शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा लागि परेको कलेजका प्राचार्य घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
योसँगै कलेजमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा व्यवस्थापन विषयमा अध्यायपन गराउँदै आएको छ । कलेजको उत्कृष्ठ नतिजाका कारण पछिल्लो समय इटहरीबाट वाहिर जाने विद्यार्थीहरु आफ्नो कलेजमा आउने गरेको कलेजले जानकारी दिएको छ ।
फरक ढंगको अध्यापन शैली र अनुशासित वातवरणका कारण कोशी कलेजले आफुलाई छुट्टै बनाउन सफल भएको छ । दक्ष र सृजनशिल विद्यार्थी उत्पादन गर्ने कार्यमा यो कलेज अग्रणी छ । यहाँको शैक्षिक वातावरणको चर्चा इटहरीमा मात्रै नभएर समग्र पूर्वमै हुने गरेको छ । अध्ययनसँगसँगै आफु भित्रको प्रतिभालाई पनि सँगै लिएर जाने विद्यार्थीहरुको लागि पहिलो रोजाईमा पर्ने गरेको छ यो कलेज ।
२०६२ सालाबाट प्ल टु अध्यापन सुरु गरेको यो कलेजले छोटो समयमै उत्साहजनक ढंगबाट आफुलाई विकास गर्न र त्यहि अनुसारको नतिजा निकाल्न सफल पनि भएको छ ।
प्ल टुमा विज्ञान ,व्यवस्थापन र शिक्षा विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । स्नातक तहमा वि.वि.एस र वि एड तहको पठनपाठन हुँदै आएको छ । कोशी कलेज कवि मनुमञ्जिले पढाउने कलेज भनेर पनि चर्चामा आउने गरेको पाइन्छ ।
इटहरीमै रहेर सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुवै विषयको गुणस्तरीय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि पहिलो रोजाईमा पर्छ शुष्मा इन्जिनियरिङ कलेज । पूर्वकै उत्कृष्ठ इन्जिनियरङ शिक्षा पढाई हुने शैक्षिक गन्तव्य हो यो । इटहरीमै रहेर प्राविधिक शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीहरुको लागि रोजाईमा पर्ने गरेको छ ।
यो कलेजले हाल प्ल टुमा विज्ञान, व्यवस्थापन विषयमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । व्यवस्थापन विषय अन्र्तगत नै होटल म्यानेजमेन्ट र कम्प्युटर साईन्स विषय पनि पढाई हुने छ । यस्तै डिप्लोमा तहमा भने सिटिईभिटीबाट सम्बन्धन लिएर इन्जिनियरिङ विषयको सिभिल र कम्प्युटर विषय पनि पढाई हुँदै आएको कलेजका प्राचार्य बोधराज नेपालले जानकारी दिनुभयो । योसँगै कलेजमा वि.वि.एस, वि.एस. सि. सि.एस आई .टि विषयमा पनि अध्यापन गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा होटल म्यानेजमेन्ट र वि.एस.सी सी.एस. आई.टी विषयमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढेर गएको छ
समग्रमा यो कलेजले मोफसलमै रहेर सहज तरिकाले सैद्धान्तिक र प्राविधिक दुवै विषयको अध्ययापन गराउँदै आएको छ । प्राविधिक शिक्षा पढ्नकै लागि इटहरी बाहिर जान चाहने विद्यार्थीको ठुलो चापलाई रोकिदिएको छ ।
स्थापनाको छोटो समयमै नमुना कलेज विद्यार्थीहरुको रोजाईमा पर्न सफल भएको छ । इटहरीका अन्य कलेजहरु भन्दा निकै पछि स्थापना भएपनि ग्रिनपिस नुमना कलेज अन्य कलेजहरु सरह नै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षा र विगतमा पढाई हुँदै आएका संकायसँगै अन्य कोर्षहरु पनि पढाउन थालेको छ यो कलेजले । यो कलेजमा प्लस टुमा विज्ञान र व्यवस्थापन विषयमा अध्यापन हुँदै आएको छ । प्लस टु तहमा यो कलेजले बायो कम्प्युटर, फिजिकल ग्रुप, होटल म्यानेजमेन्ट र कम्प्युटर साईन्सका कक्षाहरु पनि सञ्चालन गर्दैै आएको कलेजका प्राचार्य धर्म न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै डिप्लोमा तहमा वि.वि.ए, वि .एस. डब्लु. वि.सि.ए. र वि.एच.एमका कोर्षहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कलजेका कतिपय कोर्षहरु विद्यार्थीहरुको रोजाईमा पर्ने गरेको र इटहरीका अन्य कलेजहरुमा नभएका कारण पनि यस प्रति विद्यार्थीहरु यी कोर्ष पढ्नका लागि इटहरी सम्म आईपुग्ने गर्दछन् । पूर्वमा पनि वि.एस. डब्लु कोर्षमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढ्दै गएको छ । यो कोर्ष गरेका विद्यार्थीहरु अहिले फिल्डवर्क गर्नका लागि इटहरी र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न सरकारी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा जाने गरेका छन् । अलि बढि प्राक्टिकल विषयहरु भएकाले पनि यो कलेजका कोर्षहरु पढ्नका लागि विद्यार्थीले रुचि देखाउने गरेका छन् ।
व्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्दै बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य बनाउन चाहने विद्यार्थीहरुका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो इटहरीको कस्तुरी कलेज । कस्तुरी कलेजले व्यवस्थापन विषयलाई प्राथमिकता दिँदै पठन पाठन गर्दै आएको छ । व्यवस्थापन संकायको मात्र पढाई हुने इटहरीको एक मात्र कलेज हो कस्तुरी कलेज । व्यवस्थापन क्षेत्रका दक्ष शिक्षक तथा विभिन्न बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्दै आएका शिक्षकहरुले पढाउँदै आएको पाईन्छ ।
कस्तुरी कलेजमा व्यवस्थापन संकायमा प्लस टु, वि.वि.एस र वि.वि ए. र एम. विस एसका कक्षाहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् । व्यवस्थापन क्षेत्रमा पूर्वमा नै राम्रो छाप छोड्न सफल बनेको छ यो कलेज । वि.वि.ए कोर्षका लागि धेरै विद्यार्थीहरु यस तर्फ आकर्षीत बन्ने गरेका छन् । तर पछिल्लो समय इटहरीका अरु कलेजको तुलनामा यो कलेजको शैक्षिक गुणस्तरको चर्चा कम हुन थालेको छ ।
जनता बहुमुखी क्यामपस इटहरी र आसपासका पहाडी जिल्लाबाट आएका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्था हो । इटहरीमा आर्थिक हिसावले कमजोर भएका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने संस्था हो जनता बहुमुखी क्याम्पस । स्वअध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुको ठुलो संख्या जनता बहुमखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने गरेका छन् ।
यो पब्लिक क्याम्पसले प्लस टु देखी स्नातकोत्तर तह सम्म गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ ।
समग्रमा इटहरीमा आफ्नो छुट्ै पहिचान र विशेषता भएका कलेजहरु रहेका छन् । यी कलेजहरुले ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । यी देखी बाहेकका अन्य धेरै उच्च मा.विहरुले पनि गुणस्तीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
यी इटहरीका कलेजका कुरा भए । कतिपय बिद्यार्थीलाइ कुन ग्रेडले के पढ्न पाउने भन्ने पनि अन्यौल हुन सक्छ । यस्लाइ हेरौ ।